India-Myamar Archives - Page3of4- News @ M-Media
သူပုန်များကို မြန်မာနိုင်ငံထဲအထိ အိန္ဒိယက ၀င်ရောက်ချေမှုန်း
ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၅ M-Media – အိန္ဒိယရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် သူပုန်များက ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ သူပုန်စခန်းများကို အိန္ဒိယစစ်တပ်က ၀င်ရောက်ချေမှုန်းခဲ့သည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားလိုက်သည်။ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးကို ယမန်နေ့မနက်ပိုင်းက ၀င်ရောက်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သူပုန်စခန်း ၂ ခုကို[Read More…]
June 10, 2015 — အာရှ-ပဖိဖိတ်, မြန်မာသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း
မနီပူးရ်ရှိ အိန္ဒိယစစ်ကား ချုံခို တိုက်ခိုက်ခံရ၊ တိုက်ခိုက်သူများမှာ မြန်မာဘက်က လာကြောင်း ထောက်လှမ်းရေးပြော
ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၅ M-Media – အိန္ဒိယနိုင်ငံ မနီပူးရ်ဒေသတွင် ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့် အိန္ဒိယစစ်သား ၂၀ သေဆုံးခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်သူများမှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးဌာနက ပြောကြားလိုက်သည်။ . ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့က[Read More…]
June 7, 2015 — အာရှ-ပဖိဖိတ်, မြန်မာသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း
အိန္ဒိယ၊ ဂျပန် ‘Soft Power’ နှစ်ရပ်ရဲ့ဆုံမှတ် မြန်မာပြည်
ဧပြီ ၁၄ ၊ ၂၀၁၅ M-Media ချစ်ကြည်မှုတိုးမြှင့်လာနေတဲ့ နိုင်ငံနှစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံထဲ အတူတစ်ကွ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်မှုမှာ အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အထိ အခွင့်အလမ်းရှာမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကတည်းက အစိုးသစ်နဲ့အတူ – စီးပွားရေးပုံပြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံကို ယခုချိန်မှာ[Read More…]
April 14, 2015 — ဆောင်းပါး
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကမ်းလွန်ရေနံ လုပ်ကွက် နှစ်ခု လုပ်ကိုင်ရန် အိန္ဒိယရေနံ ကုမ္ပဏီ စာချုပ်ချုပ်
ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ၊ ၂၀၁၄ M-Media – အိန္ဒိယ၏ ဒုတိယ အကြီးဆုံး ရေနံကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Oil India မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကမ်းလွန် ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ကွက်နှစ်ခု လုပ်ကိုင်ရန် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဟု[Read More…]
December 14, 2014 — မြန်မာသတင်း
ရေနွေးငွေ့စွမ်းအင်သုံး ဓါတ်အားထုတ် စက်ရုံ တည်ဆောက်ရေး မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယ ဆွေးနွေး
သြဂုတ် (၅)ရက် M-Media . မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရေနွေးငွေ့စွမ်းအင်သုံး ဓါတ်အားထုတ် စက်ရုံတစ်ခုကို အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် တည်ဆောက်ရေး ပဏာမဆွေးနွေးမှု တစ်ရပ်ကို ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အိန္ဒိယ မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်များသည် သြဂုတ်လ[Read More…]